China lelee ụlọ ọrụ CS2 na ndị nrụpụta | Foton
Enyemaka dị mma na ịkwọ ụgbọala na-eduga gị n'ọdịnihu ọhụụ
Dị Mmanụ Dizel / mmanụ ụgbọala
Na-akwọ ụgbọala Type 4 * 2
Issionpụ Euro IV / V
Ntọala Wheel 2570/3110
Injin 4JB1-70 KW / F2.8-96 / 110 KW
Site na ihe nketa ma tinye aka na ihe ọhụrụ, VIEW S gosipụtara ikuku nke ịdị mma na nkọwa ọ bụla. Chụso izu oke na oghere, arụmọrụ, nchekwa na ịrụ ọrụ anaghị akwụsị.
ISF2.8-Ike ike isi si Cummins; 96KW-Ike siri ike; Ike ike-Otu n'ime ọkụ kachasị elu-kwa-liter ọkụ ọrụ mmanụ dizel na ụwa; Injin ahụ nwere mmepụta torque nke 280N.M nke dị 22.5% -60% dị elu karịa nke ngwaahịa ndị yiri ya; Mkpụrụ ọkụ kachasị na 1400 r / min; 8.3L-Fuel oriri kwa 100 km.
ISF 2.8 engine dizel na-enye injinia igwe ọkụ dị elu, njikọta elektrọnik, sistemụ mmanụ ụgbọ ala dị elu na turbocharger, nke kachasị mma maka ngwa ụgbọ ala azụmaahịa.
IKE: 107 - 160 hp
Akwụkwọ: EURO 3
Na-akara 4-cylinder, 16-valve, SOHC, multiport EFI
N'ịnabata usoro nhazi abụọ, mpempe hydraulic, ogwe aka nke nwere agịga agịga, isi mkpuchi isi na ibe ya
Ọ na atụmatụ elu ike, kọmpat ewu, ala vibration, ala mkpọtụ, ala mmanụ ụgbọala oriri, ala emission, wdg
Mechatronic (njikwa nnyefe njikọ)
ASIS - usoro ngbanwe mgbanwe
High-to-weight ratio (dabere na Lepelletier gia set njirimara)
Ọkwọ ụgbọ ala / n'ihu ndị njem n'akụkụ akpa ikuku abụọ
Onye na-echebe nchekwa
Hamma nchekwa na-abawanye nchekwa nchekwa na mberede
Imefe Windowzọ Mgbapụ Isi
N'elu windo ụzọ mgbapụ na-eme ka nchekwa gị
Royal Saloon Royal Saloon bụ nsụgharị maka ezinụlọ na azụmahịa. Site na ime okomoko, nnukwu ohere na ngwa a pụrụ ịdabere na ya maka nkasi obi na nchekwa, ọ nwere ike ilekọta onye ọ bụla karịrị nnukwu.
Onye na-akwado ndị na-akwado ya na-egbo mkpa maka ebufe ndị njem. Na nhazi ọtụtụ oche, ikike nke ndị njem 14-17 dị.
Transor Transor mbipute mepụtara maka ibu ibu na-ebufe. Ikike kachasị ibu nwere ike iru lita 2000.